Ahoana ny fomba hamoronana atiny azo zaraina | Martech Zone
Alahady, Septambra 6, 2015 Alahady, Septambra 6, 2015 Douglas Karr
Araka ny voalazan'ny The New York Times Customer Insight Group amin'ny whitepaper vaovao, Ny Psychology amin'ny fizarana, misy antony 5 lehibe mahatonga ny olona hizara amin'ny Internet:
sarobidy - Mitondra atiny sarobidy sy manabe ho an'ny hafa
Identity - Ny famaritana ny tenantsika amin'ny hafa
Network - Mampitombo sy mamelona ny fifandraisantsika
anjara - Fahafenoana tena, lanja ary fandraisana anjara amin'izao tontolo izao
antony - Manaparitaka ny antony na marika
Ny tatitra ao amin'ny New York Times dia fikarohana mahafinaritra ary manome ny asany any Martech. Na dia manangom-bola amin'ny bokinay aza izahay, ny tranonkala dia tsy miankina amin'ny tena (na dia efa tonga eo aza izahay). Martech Zone manome ny tari-dàlana momba ny fahafahantsika misafidy. Teknolojia marketing, teknolojia fivarotana ary teknolojia an-tserasera orinasa manatona antsika hanangana ny fisian'izy ireo tranonkala ary hampitombo ny anjarany amin'ny tsena. Izy ireo dia manao izany noho ny fototry ny fahatokiana sy ny lanja nomenay tamin'ny alàlan'ny lahatsoratray eto.
Tena hafahafa izahay momba ny atiny izay nofidinay hanoratra sy hizarana ary hiasa hahazoana an'io atiny azo zaraina. Ahoana no fomba hitantanantsika ireo loharano (toy ny fikarohana nataon'ny New York Times), soratantsika ny atiny ary zaraintsika hizara izany?
Platform - Alohan'ny hanombohantsika manoratra aza dia efa nataonay antoka fa manohana ny fizarana ny tranokalanay. Ny sary asongadina sy ny sombin-javatra manan-karena dia miantoka ny fanatsarana ny atiny ho fizarana ara-tsosialy. Ny tsy fahitana an'ity fototra ity dia mety hanimba na dia ny atiny tsara indrindra aza raha zaraina. Tsy misy te-hanana asa amin'ny fizarana ny atiny. Ataovy mora izany.
Lohahevitra miady hevitra - Ny angon-drakitra mampiady hevitra, ny fanakorontanana ary ny fampijanonana diso fampahalalana dia zaraina mihoatra ny salanisa. Ireo lohahevitra mampiady hevitra ireo dia matetika mampifanohitra antsika amin'ireo mpitarika indostria saingy mahazo ny fanajan'ireo mitovy taona aminy sy ireo mety ho mpanjifany.
Sary an-karena - Ny fampidirana sary dia mandoko sary mahafinaritra ao an-tsain'ny olona iray. Topazo maso ny sary namboarinay ho an'ity lahatsoratra ity. Izy io dia mandoko sary mazava iray izay mitarika ny fahalianana ary manome ny toerana halehany raha sanatria ka mivoaka tsy misy rohy ilay izy.
Votoatiny misy vokany - Raha manambara fiovana lehibe i Google izay mety hisy fiantraikany amin'ny mpamaky antsika, dia mizara ny vahaolana hitazomana ny mpamaky antsika alohan'ny fihodinana. Izahay dia tsy mizara ny vaovao momba ny indostria toy ny fampiasam-bola, ny fanovana toerana, na ny merger izay tsy misy akony amin'ny mpamaky anay.
Votoatiny sarobidy - Raha toa ny votoatiny afaka mampitombo ny tamberim-bolanao na mampihena ny vidinao dia tianay ny mizara izany vahaolana na vokatra izany. Ity atiny azo zaraina ity dia mitarika fitsidihana taonina amin'ny famoahana anay.
Discovery - Mizara topy maso momba ny varotra sy ny haitao mifandraika amin'ny varotra izahay isan-kerinandro ao amin'ny bilaogy teknolojia marketing mba hahafantaranao fa misy vahaolana any izay naorina manokana ho an'ny olan'ny orinasanao. Ny fahafantarana ireo rindranasa ireo dia nahatonga anay ho loharano malaza ho an'ireo sampan-draharaha misahana ny varotra, marketing ary varotra.
fanabeazana - Tsy ampy ny manafintohina vahaolana fa manandrana manaparitaka izay zavatra hita rehetra miaraka amin'ny torohevitra ho an'ny mpamaky izahay mba hahombiazana kokoa. Nozaraina ny atiny manamora ny fiainan'izy ireo. Sarotra ny mahita torohevitra tsara tsy mitaky vola amin'izao andro izao!
Ny tagline antsika dia Fikarohana, fikarohana, ianarana ary ireo tanjona ireo dia mitondra ny fizarana ny atiny. Mitombo hatrany ny isa azontsika raha tsy mila mandoa vola amin'ny fampiroboroboana izahay - statistika tena mahavariana. Mazava ho azy fa naharitra folo taona vao nahalala ireo paikady ireo. Ary mazava ho azy - mizara azy ireo aminao izahay mpamaky anay! Tianay hahomby ianao.
Aza misalasala mizara ny sary noforoninay mba haseho maninona ny olona no voatosika hizara amin'ny Internet:
Apr 26, 2016 amin'ny 1: 44 AM
Nanomboka namaky an'ity aho fa tsy nitsambikina betsaka fa nahita mihoatra ny noeritreretiko. Hevitra tsotra sy mahery eto. Misaotra. Manantena aho fa afaka manaraka ny sasany amin'ireo of